Inkonzo yokugcina impahla yase China kunye nommeli | Ilanga
Nikezela ngenkonzo yokugcina efanelekileyo, ekhuselekileyo nesimahla e-China
Sine-3000 + isikwere seemitha zokugcina impahla eShenzhen, Nikezela ngokusetyenziswa simahla iinyanga ezintathu kubathengi abatsha, kunye nakwasimahla emva kweenyanga ezi-3 ngokusekwe kwi-60Pcs yeeodolo zokuhambisa ngenyanga, i-3000m² yokugcina inokuhlangabezana nesidingo sakho sokukhula kwempahla, ngokukhawuleza odola kwaye ulungiselele ukuthunyelwa. Thina Indawo yokugcina izinto yase China ukugcina isitokhwe sakho sikhuselekile, sigcwalisiwe ngokhuseleko lwe-24/7 kunye ne-inshurensi.
Inyathelo1: Ukufumana iiMveliso eziGcinwayo
Into ekufuneka uyenzile kukugcwalisa isaziso sokuhambisa ngenqanawa (ASN) kwangaphambili xa uthumela uluhlu lwabathengisi baseTshayina kwivenkile yokugcina impahla yaseChina. Ngale ndlela, inkqubo yokugcina yethu iya kuyazi imveliso kunye nobungakanani bayo, kwaye inokuqinisekisa ukuba ifikile kwaye iyenziwa ngexesha elifanelekileyo.
Inyathelo3: Ukugcina eSunson Warehouse
Ukuba ii-odolo zakho ze-E-Commerce zibekwe kwihlabathi liphela, ukugcinwa e-China lolona khetho lufanelekileyo. Kungenxa yokuba indleko zokusebenzisa iziko lokuhambisa iimpahla lase China liphantsi kwaye isantya sothutho siyakhawuleza.
USunson unenkqubo yolawulo lwendawo yokugcina yokugcina (WMS) yolawulo lwempahla kunye nokuchaneka kwempahla. Siqinisekisa ukuba ukuchaneka kwempahla kungaphezulu kwama-99%. Uluhlu lwexesha lokwenyani lulungele wena ukuba ujonge ubungakanani bempahla kwaye uzalise uluhlu lweempahla ngexesha ukunqanda ukunqongophala.
Ukuzalisekiswa kwendawo yokugcina izindlu yase China
Inkonzo yokugcwaliseka kwendlu yokugcina impahla yase China
Inkonzo yokuZalisekiswa kweNdawo yokugcina yase China kubaThengisi beBigcommerce
Inkonzo yokuZalisekiswa kweNdawo yokugcina yaseChina yabathengisi be-Ebay
Inkonzo yokuZalisekiswa kweNdawo yokugcina yaseChina yabaThengisela iMinqweno
Inkonzo yokugcwaliseka kwendlu yokugcina impahla yase China kubaThengisi beWoocommerce